Anyị kwesịrị ịwụnye antivirus na ngwaọrụ gam akporo anyị? | Akụkọ akụrụngwa
Anyị kwesịrị ịwụnye antivirus na ngwaọrụ gam akporo anyị?
Villamandos | | android, General, Telephony
Fewbọchị ole na ole gara aga, anyị bipụtara otu isiokwu ebe anyị gwara gị ụfọdụ ihe kacha mkpa kpatara na ịkwesighi ịwụnye RAM na batrị kachasị na ngwaọrụ mkpanaka gị ya na sistemụ arụmọrụ nke gam akporo, ma taa, anyị laghachiri n'ibu ahụ na isiokwu ọhụrụ metụtara ya, nke anyị kwenyere na ọ ga-enyere gị aka nke ukwuu ma zere ịbanye na nsogbu ndị nwere nsogbu ụfọdụ mgbe ụfọdụ.
Ma obu ya bu na taa anyi ga agbali iza ajuju a Anyị kwesịrị ịwụnye antivirus na ngwaọrụ gam akporo anyị?. Azịza ya nwere ike ịdị ka ihe dị mgbagwoju anya, mana ọ bụghị na ọ dị ka nke anyị gosiri gị maka ọjụjụ anyị nyere gị iji wụnye ihe ncheta batrị RAM na batrị.
1 Echegbula, gam akporo dị mma
2 Antivirus ọ bara uru maka ihe?
3 Emela nzuzu, jiri ọgụgụ isi mee ihe
Echegbula, gam akporo dị mma
Ọ bụrụ na anyị lelee akụkọ nchebe gam akporo kachasị ọhụrụ, nke Google bipụtara, anyị nwere ike ịhụ nke ahụ naanị 0.15% nke ndị ọrụ ibudatara ngwa sitere na Google Play bu oria na malware ma ọ bụ phishing n'oge 2015. Mgbe ngwa ndị ebudatara na ụlọ ahịa ngwa ngwa Google abanye ebe ahụ, ọnụọgụ ahụ ruru 0.50%, na-adịchaghị oke ma.
Na data ndị a anyị nwere ike ịsị na onye ọrụ ọ bụla na-eji ngwaọrụ nwere sistemụ arụmọrụ gam akporo nwere ike ibi n'udo ma ọ na-esiwanye ike ibute ọrịa site na Google Play. Google na-agbasi mbọ ike iji mezuo nke a ma ọ bụ na kwa ụbọchị ọ na-enyocha ngụkọta nke ngwa nde 6.000 na nyocha ọ bụla na-erughị 400 nde ngwaọrụ na ngwa nke nje malware.
Imirikiti ndị ọrụ na-ebudata ngwa ndị anyị rụnyere na ama ma ọ bụ mbadamba anyị site na Google Play, yabụ na ị gaghị atụ ụjọ ma ọ bụ nsogbu ọ bụla. N'aka nke ọzọ, ọ bụrụ na ị jiri ebe nchekwa ngwa ọ bụla na-ebi na mpụga Google ma ọ bụ wụnye ngwa .APK ị na-ebudata ebe ọ bụla, ihe gbanwere nke ukwuu.
Antivirus ọ bara uru maka ihe?
Site n’ihe i nweworo ike iguta ruo n’ebe a, ị ghaghi iza onwe gi ajuju a. Ọ bụrụ na ịnweghị ka o doo anya, naAnyị nwere ike ikwu n'ụzọ doro anya na antivirus adịghị mma maka ọtụtụ na gam akporo, ma e wezụga iri nri nke ngwaọrụ gị.
Ọtụtụ ụlọ ọrụ buru ibu nwere antivirus ha maka kọmpụta dị, dị ka Nortor, Avira ma ọ bụ Avast, amalitela antivirus nke ha maka ngwaọrụ mkpanaka ma ọ bụ mbadamba nwere sistemụ arụmọrụ gam akporo. Ọkwá ya, na ụfọdụ nchegbu na-enweghị isi nke ndị ọrụ na nje na-emetụta ngwaọrụ ha, emeela ụdị ngwa ndị a n'etiti ndị kachasị ebudata.
android Ọ bụghị sistemụ arụmọrụ nkịtị na nke ugbu a, n'adịghị ka Windows, dịka ọmụmaatụ, ka ngwaọrụ anyị wee nwee nje, ndị ọrụ n'onwe ha ga-abụrịrị ndị na-eji aka ha eme ihe ọjọọ ahụ. Nke a na - eme ka o sikwuoro anyị ike iji nje butere ọrịa. Dị ka anyị kwuru na mbụ, ma ọ bụrụ na anyị na-download ngwa si Google Play, na anyị na-ejedebe na a virus na anyị gadget na-ebelata ihe fọrọ nke nta efu ohere.
Inwe ihe antivirus arụnyere na gam akporo ngwaọrụ anyị agaghị enyere anyị aka ma ọlị, mana ọ ga-eri ọtụtụ ihe onwunwe. Ọ bụrụ na anyị nwekwara naanị 1 GB nke Ram, ọ ga-eri nnukwu akụkụ ya, na-eme ka smartphone ma ọ bụ mbadamba anyị nwayọ nwayọ. Dị ka a ga - asị na ihe a niile ezughi, ngwa ndị a nwere ọtụtụ ọrụ, na mgbakwunye na antivirus, nke ka na - ebelata ma “na - emebi” ngwa anyị.
Emela nzuzu, jiri ọgụgụ isi mee ihe
Mgbe ị nwere ngwaọrụ mkpanaka nwere sistemụ arụmọrụ gam akporo, otu n'ime ihe ndị anyị ga-eji ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ụbọchị ọ bụla bụ ọgụgụ isi. Google na - etinye anyị ngwa ngwa dị ka Google Play ebe anyị na - enweghị ihe ọ bụla na - efu na na oke pasent anaghị enye anyị ihe egwu ọ bụla. O doro anya na gam akporo na-enye onye ọrụ ọ bụla ohere ịwụnye ngwa ndị anaghị ebudata na ụlọ ahịa gọọmentị na nke dị n'akụkụ ndị ọzọ, ọ bụ ezie na a naghị atụ aro nke a, ọkachasị ma ọ bụrụ na ị naghị eji ezi uche.
Na netwọk nke netwọkụ enwere ọtụtụ narị peeji nke na-enye anyị ngwa, iji ledoo WhatsApp nke onye ọzọ, iji nweta ego na-enweghị njikwa ma ọ bụ ịmara onye na-ele profaịlụ Faceboook gị. Imirikiti ngwa ndị na-ekwe nkwa nnukwu ihe na enweghị isi adịghị maka ibudata site na Google PLay n'ihi na n'ọtụtụ ụlọ ha bụ nnukwu isi mmalite nke malware. Ọ bụrụ na anyị ejiri ezi uche, anyị ekwesịghị ịwụnye nke ọ bụla n'ime ngwa ndị a na ihe ndị ọzọ, ekwenyere m na anyị ekwesịghị ịwụnye na ngwa anyị ngwa ọ bụla enweghị ike ibudata site na ụlọ ahịa ngwa ngwa gam akporo.
N'ịlaghachi n'okwu ahụ dị na aka, inwe ezi uche anyị nwere ike ịsị na anyị achọghị antivirus. Nke a bụ ihe ọbụlagodi Google kwuru Adrian Nwachukwu, A gam akporo Chief Nche Engineer; "Echeghị m na 99% nke ndị ọrụ chọrọ uru nke antivirus. Ọ bụrụ n ’ọrụ m achọrọ m mkpuchi ọzọ ọ ga-abụ ihe ezi uche dị na ya ime ya. Ma, ọ dị mkpa ka onye ọrụ gam akporo gam akporo wụnye antivirus? Kpomkwem abụghị.
Anyị kwadoro ya, mana ọ bụrụ na onye dịka Ludwig kwadoro ya, echere m na anyị nwere ike idozi okwu ahụ wee gwa gị niile nwere antivuris arụnyere na ngwaọrụ gị yana sistemụ arụmọrụ gam akporo ịmalite nyocha otu esi ewepụ ya kpamkpam ebe ọ bụ na ọ dịghị mkpa anyị nwekwara ike ịsị na ọ na-emerụ ahụ. Dị ka nkwanye, anyị ga-agwa gị na ọ gaghị ezuru ime mweghachi zuru ezu nke ngwaọrụ iji kpochapụ akara ọ bụla nke antivirus ahụ.
Ì chere na ọ bụ ihe ezi uche dị na itinye antivirus na ngwaọrụ gam akporo gị?. Gwa anyi na oghere edere maka ịza ihe na post a ma obu site na netwọkụ ndi mmadu ebe anyi no ebe anyi chọsiri ike ka gi na gi kparita uka.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Anyị kwesịrị ịwụnye antivirus na ngwaọrụ gam akporo anyị?
Ihe mgbochi ahụ ọ na-enyere aka na mpụga mpụga na netwọkụ ghe oghe ma ọ bụ gam akporo na-egbochikwa intrusions ahụ?
N'uche m ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Otu n'efu enwere zuru ebe ọ bụ na ọ bụghị naanị antivirus ka a na-eji maka ngwa yana mgbe ị na-agagharị ma ọ bụ budata faịlụ.
O yikarịrị ka ọ bụrụgodi na ị na-agagharị n’ Internetntanet ma ọ bụ na-ebudata ihe ọ bụla, ọ ga-abụ na ọ ga-ebute 0,00000001%.
Ahụmahụ m, 14 Trojans wepụrụ ya na CM Security. Ekwetara m na m na-agagharị na peeji nke nbudata ebe enwere ọtụtụ malware ma ekwentị m na-agbagharị ...
Jorge Pedro kwuru dijo
na mpempe, dị ka a ịdọrọ na echiche si pc, antivirus ngwa na smart ekwentị dị ka ozugbo o kwere omume; Ọ bụ na ngwa ndị ọzọ ka ọ bịara, ma ọ bụ ihicha ụzọ nke ngwa ngwa "adịghị ọcha", yana ijikwa batrị. Akụrụngwa adịghị arụ ọrụ dị elu ma amaghị m ma ọ bụrụ na nrụnye niile a metụtara ya na nwayọ nwayọ, mana nke ahụ, site ugbu a gaa n'ihu, m ga - amalite "nhicha" ngwa niile ndị a na-enweghị isi, ọ bụ eziokwu. Salu 2.
Zaghachi Jorge Pedro
Nke a bụ njedebe dị elu nke ahịa ekwentị mkpanaka mgbe mgbakwunye ọhụrụ
Achọrọ m ịzụta smartwatch?